Indawo eyodwa embindini kunye nasemanzini e-Sneek
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguGea
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uGea iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Le ndlu yangasese yabasebenzi ibekwe ngokukodwa ukusuka ngo-1908 ibekwe ngasemva kwisikhululo sembali saseSneek. Ungahamba uye kwivenkile enkulu phakathi komzuzu omnye kwaye ngaphakathi kwemizuzu emi-5 ukuya kumbindi weSneek kunye neendawo zayo ezipholileyo, iivenkile kunye neeresityu.
Xa ungena, uya kufumana isitshixo sendlu kwaye yonke indlu iya kuba seyakho!
Udiniwe kwaye wanelisekile yimibono emininzi? Kukho iqonga (labucala) phezu kwamanzi elinombono omhle wesikhululo esidala.
Xa ungena endlwini uya kufumana igumbi lokuhlala elipholileyo elinesilingi eqaqambileyo ngasekhohlo. Apha uya kufumana i-sofa ekhululekile kunye netafile yegumbi lokutyela elinezitulo.
Ikhitshi ingasemva kwendlu kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo
(isitovu segesi, ifriji, umatshini wokuhlamba izitya kunye ne-microwave).
Indlu yangasese isemva kwekhitshi.
Izinyuko eziya kumgangatho wokuqala zinika ithuba lokungena ngasekhohlo kwigumbi lokuhlambela elihlaziyiweyo (enesinki, indlu yangasese yesibini kunye neshawari). Ukuba uhamba ngqo phambili kwizinyuko ungena kwigumbi lokulala elibanzi elinebhedi ephindwe kabini kwaye ... ungayibona imbonakalo entle phezu kwamanzi!
Xa imozulu intle, kumnandi ukuba ngaphandle kwaye ungasebenzisa igadi yangaphambili kunye ne-overtuin emanzini!
4.78 ·Izimvo eziyi-18
Into ekhethekileyo kukuba indlu isembindini kwaye ibekwe phezu kwamanzi, kodwa kwindawo ezolileyo!
Oku kungenxa yokuba isitalato sinesiphelo kwaye kuphela ngabahlali/iindwendwe ezisebenzisa esi sitrato. Ngoko musani ukuzikhathaza ngezihlwele!
Umbuki zindwendwe ngu- Gea
Ndizozamkela iindwendwe, ndinike isitshixo sendlu ndibabonise apha endlini. Emva koko andikho kwaye unayo yonke indlu onayo. Ngethuba lokuhlala ndifikeleleka ngokulula kwimibuzo njl. Xa iindwendwe zihamba, ndiya kuzijonga (isandla kwisitshixo kunye nekhadi lokupaka kwaye ndikhangele ukuba indlu ihanjiswa icocekile).
Ndizozamkela iindwendwe, ndinike isitshixo sendlu ndibabonise apha endlini. Emva koko andikho kwaye unayo yonke indlu onayo. Ngethuba lokuhlala ndifikeleleka ngokulula kwimibuzo nj…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sneek